Mashruuca Titan, faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan gaariga iswada ee Apple | Waxaan ka socdaa mac
Mashruuca Titan, faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan gaariga iswada ee Apple
In Apple ay in muddo ah ka shaqeyneysay warshadaha gawaarida iskeed u maamusha layaab maahan. Intaa waxaa dheer, waxaan horeyba u ognahay in shirkada uu hogaamiyo Tim Cook aysan ka fikireynin inay gawaari ka sameysato xoq, laakiin waxay doonayaan inay daryeelaan qaybta software. Taasi waa, naftaada u hur qaybta ugu caqliga badan ee gaariga. Mashruucani waa lagu yaqaan magaca «Mashruuca Titan».
In kasta oo aysan ahayn markii ugu horreysay ee ay soo ifbaxaan sawirrada gawaarida iswada ee caanka ah ee Apple, haddana waa wax cusub in lagu arko iyaga oo fiidiyoow ah oo faallo ka bixinaya - oo duubay - MacCallister Higgins (Aasaasihii shirkada tagaasida oo madax banaan Safar) Qeybtaan waxaad ka arki kartaa waa maxay hubka ay Apple ku rakibto saqafka sare ee gawaarida la xulay. Kiiskan Kani waa noocyada Lexus Rh450.
Inaad u baahatid in ka badan 140 xaraf si aad uga gudubto Tit's Project Titan. Waxaan ugu yeeraa «The Thing» pic.twitter.com/sLDJd7iYSa
- MacCallister Higgins (@macjshiggins) 17 2017 Oktoobar
Fiidiyowga uu MacCallister soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxaan ku arki karnaa in baararka ay wataan Lexus ee saqafka lagu rakibay ay ka buuxaan dareemayaal. Sidoo kale, aasaasaha shirkadda taksiga ayaa sidoo kale faallo ka bixiya, si ka duwan shirkadaha kale, Apple waxay kaydin kartaa dhammaan xogta laga soo ururiyay tijaabooyinka ay 'Project Titan' ku leedahay isla qaab dhismeedka baabuurta.
Dhinaca kale, laga bilaabo TechCrunch Waxay umuuqataa in ay doonayaan in ay siiyaan isbadal arinta iyo sawirada laqoday. Waana iyada oo qaabka hadda jira - iyo walxaha loo xushay imtixaannada -, ay aad u macquul tahay in Apple ay la qabsan karto moodooyinka gawaarida ee kala duwan; taasi waa in la yiraahdo, si aad u awoodo inaad ku tijaabiso noocyada kala duwan ee gawaarida: gawaarida, SUV-yada, gawaarida… Baabuurta waaweyn? Sidoo kale, waxay sidoo kale ka muujinayaan bogga tiknoolajiyada caanka ah, in Apple uu ka fekerayo soo saarista agabka isla wadada. Intaa waxaa sii dheer, marka la arko sida ay u fududaan laheyd in kor loo qaado / lagala baxo dareemayaasha, waxaa suurta gal ah in Cupertino uu wali ka helo meel kale oo laga soo uruuriyo hits badan
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Mashruuca Titan, faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan gaariga iswada ee Apple
Berri Dukaanka Apple ee cusub ee Chicago ayaa furmaya
Fiidiyow ah "qosol muhiim ah" oo leh dhibaato wasakh ah oo ku jirta kumbuyuutarka cusub ee MacBooks-ka